घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको बजार भाउ ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
घट्यो सुनको मूल्य, कति छ आजको बजार भाउ ?
आइतबार नेपाली बजारमा सुनको भाउ चार सय रुपैयाँले सस्तिएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापा वाला सुन तोलामा चार सय रुपैयाँले घट्दै ९३ हजार ६०० रुपैयाँ कामय भएको हो ।
यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य समेत आज चार सय रुपैयाँले नै घट्दै ९३ हजार एकसय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
यता, चाँदीको मूल्य भने गत शुक्रबारको मूल्यमा पाँच रुपैयाँले घट्दै आज प्रतितोला एक हजार २४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।